Ikhaya » IiNdaba zokuHamba ngeeNkcubeko » I-Kosher Gourmet Dine-Drink Adventure
I-Kosher Gourmet Dine-Drink Adventure
Ukuba kukho isiganeko esinye eNew York esingafanele siphoswe, yiKosher Food & Wine Experience exhaswa yiRoyal Wine Corp. (aka Kedem). Kule minyaka ili-13 idlulileyo, iRoyal inike ithuba lamawaka ukungcamla, ukusela, kunye nokonwabela ukutya kweKosher kwihlabathi liphela, iwayini, kunye nemimoya, kwaye inkqubo yaseNew York iveza isimanga senkalipho kwitafile yomthengisi ngamnye.
I-Kosher? Hayi uKosher!
NgesiHebhere, iKashrush, ukusuka kwingcambu kosher Kasher, kuthetha ukuba kufanelekile kwaye / okanye KUSULUNGILE kwaye ke ngoko kuqinisekisa ukulungela ukusetyenziswa. Imithetho yaseKashrus igqiba ngento evunyelweyo kunye nento engavumelekanga ukuba ityiwe.
Ukutya okuphekiweyo kwehlela kumaqela amathathu: inyama, ubisi kunye ne-pareve (ukutya okungeyiyo inyama okanye ubisi kubandakanya amaqanda, intlanzi, iziqhamo, imifuno, iinkozo, iijusi ezingasetyenziswanga, ipasta, iziselo ezihlwahlwazayo, ikofu neti, iilekese kunye namaqebengwana). Ukutya kungaphulukana nenqanaba lokuphakama ukuba kusetyenzisiwe kwinyama okanye izixhobo zobisi okanye izongezo. Itshokholethi emsulwa, ii-cookies kunye namanye amashwamshwam asenokungalungiswa ngenyama okanye ukutya okutyiwa ngaphandle kokuba ziqinisekisiwe. Iziqhamo ezithile, imifuno kunye neenkozo kufuneka zihlolwe kwizinambuzane ezincinci kunye nemibungu kuba iincukuthu azikho. Amaqanda kufuneka ahlolwe ubukho bamachaphaza egazi- nayo ayisiyiKosher.
Ukuqwalaselwa kwewayini yaseKosher
Iwayini yeKosher yenziwa ngokuchanekileyo ngokufanayo nazo zonke ezinye iwayini; Nangona kunjalo, kukho ukujongwa koorabhi ngexesha lenkqubo kwaye iwayini ziphathwa ngamaJuda agcina iSabatha. I-Gelatin, i-casein kunye negazi le-bull alikho Hayi kwinkqubo yokwenza iwayini ye-kosher kunye nokuvumba kunokufumaneka kuphela kwiibhaktheriya okanye i-enzymes ze-kosher. Yonke into esetyenziselwa ukuvunwa okanye ukulungiswa kweediliya kufuneka kwenziwe phantsi kolawulo lwe-Rabbinical Supervision. Yonke inkqubo kufuneka ilandele imigaqo yeHalacha (Umthetho weNkolo yamaJuda). Kwisidiliya, akukho zityalo zimbi zinokuwela ziveliswe kunye neediliya (uhlanganiso yenye iNo No).
Iziselo ezenziwe kwimidiliya okanye kwizidiliya ezisuselwe kwidiliya zinokugqitywa kuphela ukuba iidiliya zivela kwivenkile ye-kosher kwaye zilungiselelwe phantsi kolawulo olungqongqo lweRabbinical.
Funda inqaku elipheleleyo iwayini.